Rehefa mpifankatia roa no mifankatia - Fifandraisana
Rehefa mpifankatia roa no mifankatia
Ny olon-drehetra dia te-hahatakatra ireo izay akaiky azy, ary iray amin'ireo zavatra niainana lalina indrindra empath afaka manana dia ny mifankatia amina iray karazana aminy.
Rehefa miara-miasa amin'ny empath iray hafa dia hiaina tranga iray izay ahalalan'ny antsasany hafa azy ireo amin'ny ambaratonga ifotony, fa afaka mahatsapa ny zavatra tsapany ihany koa.
Ireto ambany ireto ny sasany amin'ireo mahatsara sy maharatsy izay mitranga rehefa mpivady roa no mivady.
Fahatakarana lalina ny fanahy
Rehefa tsy 'mahazo' ny zavatra resahinao fotsiny ny olon-tianao, fa tena afaka mahatsapa ny zavatra tsapanao, dia ho hitanao fa takatr'izy ireo ianao amin'ny ambaratonga tsy noheverinao fa tena mety.
Mety efa nandalo fahatsapana fiainana ianao toa tsy misy olon-kafa tena afaka mifandray amin'ny zavatra iainanao an'izao tontolo izao, indrindra raha manamboatra zavatra amin'ny fomba tokana ianao, na manintona ny fanentanana, sns.
ahoana no ilazana raha manintona ianao
Tampoka eo dia misy olona iray hafa afaka mahatsapa ny zavatra niainanao, ary na dia samy hafa be aminao amin'ny lafiny maro aza izy ireo ary tsy mahita an'izao tontolo izao tahaka izany, dia afaka mahita amin'ny masonao izy ireo, mahatsapa amin'ny alàlan'ny hoditrao, vetivety. Ary goavambe izany.
Izany dia iray amin'ireo fahatsapana tsy mampino indrindra eto amin'izao tontolo izao.
Fahasambarana tanteraka ny fahasambarana zaraina
Fantatrao rehefa tena lasa faly ianao, faly tokoa amin'ny zavatra iray ary te hizara izany fahasambarana izany amin'ilay olona tianao? Eny, rehefa samy mahay mangoraka ianareo dia izany no mitranga.
Tadidinao ve ny fanandramana volkano nipoaka tamin'ny kilasy siansa fony ianao mbola kely? Rehefa nampifangaroinao ny soda sy ny vinaingitra ary nisy WHOOSHsplosion goavambe? Eny, toy izany, tsy misy afa-tsy amin'ny fientanam-po sy finaritra ary lolo sy avana lolo mamirapiratra.
Hanao fiaraha-miaina biby mahafinaritra miaraka ianao
Ny zavatra iray izay itovizan'ny empaths rehetra dia ny fitiavana lalina ny fiarahan'ny biby.
Mety ho sarotra izany rehefa misy empath na eo amin'ny fifandraisana amin'ny tsy empathath, satria mety tsy ho takatr'io olona io ny maha-zava-dehibe ny fananana namana tsy olona ao an-trano.
Rehefa misy empaths roa miara-manorina fiainana, azo antoka tsara fa hisy namana manjavozavo, volom-borona, ary / na trondro mizara ny fiainany aminao.
Hiara-miondrika eo am-pandriana ianao ao anaty fahanginana milamina, mamihina ny zanak'alika na bunnies anao, na - raha tsara vintana ianao ary manana fotoana anaovana izany - mety hiafara amin'ny fihazonana karazana fitoerana masina na famonjena aza ianao. miaraka.
Tsy hampino ve izany ??
ho aiza aho amin'ny fiainako
Fikolokoloana sy fiompiana mahatalanjona
Ny empaths dia mazàna mametraka ny filan'ny olon-kafa alohan'ny azy, ka rehefa misy empaths roa ao anaty fifandraisana dia tena mifampikarakara tsara izy ireo.
Eritrereto izany: raha ny fahasambarana sy ny fahasambaran'ny vadinao no laharam-pahamehana indrindra aminao, ary ny Fahasambaranao sy ny fiainanao no laharam-pahamehana indrindra amin'izy ireo, ary afaka mifampahatsapa ny fihetsem-pon'ny tsirairay avy ianareo mba hahafantaranareo izay ilain'ny tsirairay avy… mahatahotra be izany.
Mety hiasa amin'ny sery mangatsiaka ianao ary hiseho amin'ny lasopy misy thermos ny sakaizanao satria izy ireo dia nahatsapa fa mila izany ianao.
Na ianao mety gaga ny olon-tianao miaraka amina piknik na fitsangatsangana any anaty ala satria tsapanao fa mila fotoana maharitra any ivelany izy ireo.
Hahatsapa ny filan'ny tsirairay avy ianao, indraindray alohan'ny hahatsapanao ho an'ny tenanao manokana hoe inona ny zavatra ilainao, ary fitiavana sy fikarakarana be dia be no hikoriana eo aminao.
Mahagaga ny firaisana
Efa mba niaina zavatra niainana ve ianao sy ny olon-tianao izay nifandray tokoa ka hendry, tsy azonao fantarina hoe taiza no nifarana ny iray ary nanomboka ny iray? Tranga fahita matetika amin'ny “firaisana ara-nofo” izany.
Tadidinao ve ny kely momba ny fahafaham-po mialoha ny filan'ny tsirairay avy, ary ny fametrahana ny laharam-pahamehana? Eny, rehefa mifantoka amin'ny fahafinaretan'ny olon-kafa ny roa tonta, dia afaka mahatsapa izay ilainy / tadiaviny, ary eo an-toerana tanteraka, amin'izao fotoana izao, mifantoka tanteraka amin'ny hafa ... tsy misy fifandraisana toa izany.
Ny firaisana ara-nofo azo atao raha olona roa afaka mandrendrika angovo ary mahatsapa izay tsapan'ny tsirairay dia tsy fahagagana fotsiny.
rahoviana indray i dean ambrose no miverina 2018
Fifandraisana 6 'Tsy maintsy atao' ho an'ny empaths sy HSPs
Raha mila fitiavana maharitra ianao dia mitadiava olona mahatsapa fiaraha-miory toa anao
Torohevitra 17 ho an'ny fahavelomana ho an'ny empaths sy olona marefo
Areti-mifindra ny moody ratsy
Maha-empath mahafinaritra rehefa milentika manodidina ny angovo mahery vaika, 'faly', fa rehefa ny antsasaky ny anao kosa sahirana amin'ny fihetseham-po sarotra, dia mety hisy fiantraikany be eo aminao toy izany koa izy ireo.
Tsy noho ny fanambadian'ny olon-tianao anao, fa noho ianao afaka mahatsapa ny zavatra tsapan'izy ireo.
Mety ho sarotra ny mivezivezy, indrindra raha toa ka toa tsy maninona izy ireo eny ambonin'ny faritra, ary mitebiteby na tezitra ianao ary tsy mahalala izay niavian'ireo fahatsapana ireo.
Ny fahatsapana tafio-drivotra amam-pihetseham-po nefa tsy afaka mamantatra hoe avy aiza no niavian'izy ireo dia mety ho diso hevitra tokoa, noho izany indraindray dia mila halaviran-toerana kely ianao mba hamerenanao ny fahatoniana.
… Toy izany koa ny fanaintainana ara-batana
Tsy mahazatra an'ny empaths ny mahatsapa fanaintainana mangoraka rehefa marary ireo akaiky azy ireo. Izany no antony handrenesanao zavatra toy ny fanaintainan'ny mpiasa amin'ny fiaraha-miory rehefa miteraka ny mpivady iray ary mahatsapa izany ny iray hafa.
Ny fahatsapana ny fanaintainan'ny olon-kafa dia mety ho hafahafa tokoa, ary sarotra ny miatrika azy, indrindra raha manana aretina mitaiza toy ny aretin-tratra na fibromyalgia izy ireo. Ahoana no ahafahanao mitantana ny fanaintainana amin'ny aretina izay tsy anananao?
Mety hahafantatra zavatra momba anao izy ireo alohan'ny hanaovanao izany (NA vice vera)
Fihetseham-po be dia be no afaka mijery olona iray ary afaka mamaky ny tantaram-piainany amin'ny hodiny, ny masony, ny heriny.
Mety hanampy be izany raha misy miasa toy ny therapist ary mitady hanampy amin'ny fanasitranana ny marariny araka izay tratra, saingy mety ho sarotra ihany koa ny mivezivezy amin'ny fifandraisana.
Efa nandalo fotoan-tsarotra isika rehetra, saingy tsy midika izany fa te hampidina ny vavoninay amin'ireo mpiara-miombon'antoka amin'ny andro voalohany isika: mila fotoana ny manokatra olona iray - toy ny fanodinana sosona tongolo isaky ny sosona - ary tsy manao izany isika Tsy te ho fantatr'izy ireo ny momba antsika sasany alohan'ny hahatsapantsika fa mety ny fotoana hizarana azy ireo.
tsy mahatsiaro tena ho anisan'ity tontolo ity aho
Raha nandalo banga mahatsiravina ianao izay tsy vonona ny hiresaka, ary ny namanao dia manonona ireo toe-javatra marina ireo satria 'fantany' fa niatrika azy ireo ianao, ny fihetsikao dia mety miovaova arakaraka ny tsy mahazo aina mankany amin'ny potika tanteraka.
Toy izany koa ny amin'ny tranga mifanohitra amin'izany: mety tsy tian'ny vadinao ho fantatrao avy hatrany fa efa niatrika zavatra toy ny fiankinan-doha, na herisetra, na lohahevitra maro hafa saro-pady izy ireo, fa aleony misokatra aminao amin'ny fotoanany… saingy fantatrao izany rehetra izany amin'ny fandanianao fotoana kely miaraka amin'izy ireo.
Mety ho sarotra be ny miady aminy.
Samy mila fotoana tokana ianao mba hamerenana aina
Fantatr'i Empaths fa mila mitokana izy ireo mba hamenoana ny bateriny, saingy mora kokoa ny mandray an-tanana azy rehefa samy matotra sy mahatsapa ny filan'ny tenany manokana ny roa tonta, ary afaka mampita izany amin'ny fomba mandaitra amin'ilay olona iray hafa.
conan o brian sy ny vady
Raha tsy izany ny olona iray mahafantatra ny toetran'izy ireo miory , na karazana ho clingy ary miankina , Mety horaisin'izy ireo ho irery ny filan'ny olon-tiany ho karazana fandavana.
Na dia manandrana manazava aza ny olon-tiany fa mila toerana kely fotsiny izy ireo, azo adika ho toy ny fanilihana, na hoe tsy tia azy ireo intsony, na hoe liana amin'ny olon-kafa, sns.
Ity dia zavatra mila ampitaina amin'ny fomba mazava sy mahomby, miaraka amin'ny fanomezan-toky be.
Tsy azonao afenina ny fihetsem-ponao
Raha miatrika fiasan-doha, alahelo, na fihetseham-po sarotra hafa momba ny fifandraisanareo ianao, dia afaka (ary (handray) azy ireo ny vadinao.
Betsaka amintsika no aleontsika mitazona ny eritreritsika sy ny fihetsem-pontsika ho antsika samirery rehefa manamboatra azy ireo ary manandrana mamantatra izay lalana tokony haleha, ary mety maharitra fotoana kely izany vao tena hahazo ny fitondra-tenantsika isika, indrindra amin'ny asa aman-draharaha sy ny andraikitra ara-pianakaviana.
Rehefa samy empaths ianao sy ny olon-tianao, ary mifampihetsi-po (ary na dia ny eritreritra aza, indraindray) dia tsy manana ny fahafinaretana hiasa irery ianao.
Mety hahasosotra kokoa aza izany raha tsy omen'izy ireo toerana malalaka ianao handaminana ny tenanao, amin'ny fanizingizinana fa fantatr'izy ireo fa misy zavatra tsy mety ary mitaky ny hiresahanao izany satria ny rahona dia misy fiantraikany amin'izy ireo.
Misy ambaratonga samy hafa ny fiaraha-miory, mazava ho azy, ary tsy misy fifandraisana roa tsy mitovy. Ny empaths sasany dia hifandray amin'ny iray hafa, ny sasany mety hahita ny iray hafa mahery vaika na tsy mifamatotra ampy. Ara-dalàna tanteraka izany.
Raha empatha ianao, ary manana fotoana mety hifaneraserana amin'ny olon-kafa toa anao, izay ahafahanao mitaiza fifandraisana tsara dia mendrika ny manandrana tokoa.
Mbola tsy azonao antoka hoe ahoana no ahafahan'ny empira roa miara-miasa amin'ny mpivady? Miresaka an-tserasera amin'ny manam-pahaizana momba ny fifandraisana avy amin'ny Relationship Hero izay afaka manampy anao hahalala zavatra. Tsotra.
famantarana fa tsy mihoatra ny sakaizany taloha izy
fikorontanan'ny toetran'ny olona narcissistic ary fitaka
inona no mampiavaka ny olona lahatsoratra iray
rehefa misy bandy miantso anao tsara
fanontaniana hahafantarana ny iray hafa manan-danja